Ukuphuculwa kweNkonzo yokuZisebenzela ekrelekrele | Martech Zone
Ukuphuculwa kweNkonzo yokuZisebenzela
NgoLwesine, Septemba 27, 2012 NgoLwesithathu, Septemba 26, 2012 Douglas Karr
Ukuba ufana nam, uyakudelela ukujongana nenkonzo yabathengi. Ayikuko ukuba andibathandi abantu-benza konke okusemandleni abo. Kodwa rhoqo kunangoku, ndiyazi ngakumbi malunga nengxaki endisebenza kuyo kunokuba benzayo. Ndikuthiyile ukuhlala emnxebeni ubambe imizuzu ye-5, kulandelwa yingxoxo yemizuzu eyi-15, kulandele ukunyuka kunye nokulinda ngakumbi kunye neenkcazo.
Uninzi lwemicimbi ndizilungisa ngokwam, okanye ndiye kwinethiwekhi ukuze indincede. Inkonzo yabathengi ebalaseleyo, ngokoluvo lwam, lulwazelelo olusisiseko lolwazi okanye i-FAQ endinokuzenzela ngokwam ngayo. Ndiza kuchitha isiqingatha semini ndikhangela isisombululo kunokuchola loo fowuni. Kubonakala ngathi abanye bayavuma.
Kutheni le nto sithetha ngenkonzo yabathengi kwi Ibhlog yokuthengisa? Isicwangciso ngasinye sentlalontle siqala ngokwenza ukuba inkonzo yakho ibe yeyoqobo. Xa ungaboneleli ngezixhobo abazifunayo abathengi, indawo yokuqala abakhalaza kuyo ikwi-Intanethi. Incoko engathandekiyo inokuntywila kweyona mikhankaso ilungileyo yokuthengisa!
Umfanekiso owawuthunyelwe ekuqaleni Zengage, iBhlog yeZendesk
tags: Inkonzo eyenzelweuxhaso lwabathengikwi-infographicinkonzo yomntuzendesk
Ukuxhasa Inkxaso ngaphandle kokuThengisa uMphefumlo wakho